Safari ကို Apple TV အသစ်တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း ငါက Mac ပါ
Safari ကို Apple TV အသစ်မှာဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ
သငျသညျပြီးသားအသစ်တစ်ခုကိုဆည်းပူးလျှင် Apple က TV ကို သင်ပျောက်နေသောအရာတစ်ခု၊ ဝဘ်ဘရောက်ဇာတစ်ခုသေချာပေါက်ရှိသည်။ ဂျော့ဘ်ကုမ္ပဏီသည်မအောင်မြင်ပါ Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်း ပုံစံသစ်တွင်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာသို့မဟုတ်ပွင့်လင်းသောလင့်ခ်များပါ ၀ င်သောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုလည်းခွင့်မပြုပါ။ သို့သော်အမှန်မှာ၊ ယခု set-top-box အသစ်ကို၎င်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးသင်၎င်းကိုသင်အခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်။
Safari ကို Apple TV ဖြင့်မျက်နှာပြင်အပြည့်တပ်ဆင်ထားသည်
သင်အသုံးပြုလိုပါက Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်း မင်းလုပ်နိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့တီဗီရဲ့မျက်နှာပြင်ကို AirPlay မှတဆင့်မျှဝေပါ သင့် iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod Touch မှသည် Apple က TV ကို ဒါပေမယ့်ကြည့်ရအောင်၊ မတူဘူး။ ကံကောင်းတာကကံကောင်းတာကအက်ပဲလ်ကအခုအချိန်အထိ“ အကန့်အသတ်ရှိသည်” ပေမယ့်ကစားစရာအသစ်က browser ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ ဒီဗီဒီယိုမှာလို Apple TV ပေါ်မှာ browser တစ်ခုယူချင်ပါသလား။
အောက်ဖော်ပြပါဖြေရှင်းချက်ကို Actualidad iPad မှယောက်ျားများကသင့်ကိုပြောပြပါလိမ့်မည်။ သတိပြုပါ။ အတွေ့အကြုံအများဆုံးအတွက်မလွယ်ကူပါ။
ပထမတစ်ခုမှာ Xcode တွင်သဟဇာတမဖြစ်ခြင်းကိုလိုင်းအနည်းငယ်ပြုပြင်ခြင်းအားဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည် "available.h" ဖိုင်မှ
1. "Xcode.app" ဖွင့်ပါ
၃။ ထိုနေရာတွင် Right ကို နှိပ်၍ 'Package Contents' ကိုရွေးပါ။
"မာတိကာ / Developer / Platforms / AppleTVOS.platform / Developer / SDKs / AppleTVOS.sdk / usr / include"
၅။ Xcode နှင့်အတူ "available.h" ဖိုင်ကိုဖွင့်ပါ
__OS_AVAILABILITY (တီဗီ၊ မရနိုင်ပါ) # သတ်မှတ်ချက်
__TVOS_PROHIBITED __OS_AVAILABILITY (တီဗီ၊ မရရှိနိုင်)
__OS_AVAILABILITY (တီဗီ၊ မရရှိနိုင်ပါ)
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းအလိုတော် Apple TV အတွက် Safari app ကိုတည်ဆောက်ပါ။ ၎င်းအတွက်သင်ရှာတွေ့မည့် GitHub စီမံကိန်းကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည် ဒီမှာ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြတဲ့တူညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာပါ ဒီဗီဒီယို.
ဘယ်အချိန်မှာ app ကို Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်း ထဲမှာ install လုပ်ဖြစ်ပါတယ် Apple က TV ကို သငျသညျယခုသစ်ကိုဝေးလံခေါင်ဖျားကနေတဆင့်သုံးနိုင်သည် Siri ကိုအဝေးမှ သင်ကြည့်ရှုပြီး ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများကို ဖြတ်၍ သွားနိုင်သည်။
ပြန်သွားရန် Menu ကိုနှိပ်ပါ
URL တစ်ခုသို့မဟုတ်ဝဘ်လိပ်စာတစ်ခုထည့်ရန် Play ကိုနှိပ်ပါ
trackpad ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် scroll mode နှင့် cursor mode အကြားပြောင်းနိုင်သည်
Apple က၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားပြီးမကြာမီ app ပါ ၀ င်သော tvOS update ကိုထုတ်ပြန်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်း သူ့ကိုဇာတိ Apple က TV ကိုဒါဟာနားမလည်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple က TV ကို » Safari ကို Apple TV အသစ်မှာဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ
တီဗီ 9.1 beta2ကိုလည်း developer များလက်ထဲအပ်သည်
developer များအတွက် OS X 10.11.2 beta 3